Indlu esandula ukulungiswa kwisakhiwo sembali embindini wedolophu. Zininzi iivenkile, iindawo zokutyela ezilungileyo, iigalari zobugcisa kunye nemisebenzi yamanzi kuMlambo oMtsha. 6 min drive ukuya Mt. Jefferson State Park apho unokufumana iindlela ezintle. Umzi-mveliso wesonka samasi wokhenketho kunye nokungcamla. Zihlole ngokulula usebenzisa iphedi yamaqhosha kumnyango wangaphambili. Ifumaneka ngasentla kweTrent's Tavern, kunye nomnyango osecaleni kwevenkile yokutya ekhethekileyo kunye nethiyetha yemiboniso bhanyabhanya. Uhambo olufutshane ukuya kwi-Breweries kunye neendawo zokutyela ezahlukeneyo.
Igumbi lokulala elikhulu elinenkosi enkulu ene-en-suite ebandakanyiweyo. Ibhafu enkulu inesinki engamampunge ephindwe kabini, ishawa enkulu, kunye ne-67 "ibhafu yokufunxa. Amagumbi amabini ongezelelweyo, elinye linebhedi yendlovukazi, kunye nelinye elineebhedi ezimbini ze-XL. Isinki nganye yokhuseleko olongezelelweyo Ikhitshi, amagumbi okutyela kunye namagumbi okuhlala kwabelwana ngawo ngeplani yomgangatho ovulekileyo. Khabazela emva kwaye uphumle kwindawo enkulu ngelixa ubukele i-netflix, youtube, hulu, njl. kwi-65" i-smart TV. I-smart tv eyongezelelweyo inokuqengqeleka kwigumbi lokulala olithandayo. Isofa yecandelo iguquka ibe yibhedi yokutsalwa kabini enomandlalo wejeli ophuculweyo. Uya kufumana imidlalo yebhodi emininzi kunye neeDVD zokuzonwabisa. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngezixhobo zentsimbi ezitsha kunye ne-11 foot granite island. Izihlalo zetafile yokutyela 8 ngokukhululeka. Kwikhaya elikude nekhaya, uyakuhlala ukhululekile kwaye wonwabe kule ndawo imangalisayo ye-1,650 square ft. West Jefferson retreat.
4.97 ·Izimvo eziyi-165
4.97 · Izimvo eziyi-165
IWest Jefferson yidolophu entle, enomtsalane ezintabeni. Zininzi iivenkile ezinkulu zakudala zokufumana eyona nto ifanelekileyo. Ukongezelela, kukho imisebenzi emininzi yangaphandle kwindawo yokuhamba, ukuhamba ngeenqanawa, i-tubing, i-skiing, njl. I-Ashe County Park yindlela emfutshane yokuqhuba apho iindawo zokudlala, igalufa yefrisbee, ichibi, njl ....
Ndiyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo. Enkosi